प्राबिधिक शिक्षा सन्चालन गर्ने गरी जन्मदिनमा वडाध्यक्ष ठकुरीले गरे अक्षयकोष खडा – MeroJilla.com
आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा पर्वतको महाशिला गाँउपालिका वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष जिवन बिक्रम उच्चै ठकुरीले १५ हजारको अक्षयकोष खडा गरेका छन् ।
३३ औं जन्मदिनको अवसरमा महाशिला गाउँपालिकामा प्राबिधिक शिक्षा सन्चालन गर्ने उद्देश्यले ठकुरीले १५ हजार रकम सहयोग गरी अक्षयकोष खडागर्नु भएको हो ।
प्राबिधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने नयाँ अभियानको शुरुआत गर्दै आफ्नो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा वडाध्यक्ष ठकुरीले रु. १५ हजारको अक्षयकोष शनिवार वडा कार्यलयमा औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरि शुरुआत गरेको महेन्द्रज्योति मा.बि.का प.अ. गोपाल प्रसाद् शर्माले जानकारीदिनुभयो । आगामी बर्ष देखी महेन्द्र ज्योति माध्यमिक बिधालयमा प्राबिधिक तथा व्यवसायीक धारका कक्षा सन्चालन गर्नको लागी प्राबिधिक शिक्षा तथा ब्याबसायिक तालिम परिषद को सम्बधन लिईएको छ । महाशिलामा प्राबिधिक धारका कक्षाहरु सञ्चालन गर्न गाँउपालिकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागी केहीँ रकम बिनियोजन गर्ने बताइएको छ । प्राबिधीक कक्षा सञ्चालन गर्न स्थानियवासीहरु जागरुक भईरहेका बेला वडाध्यक्षले अक्षयकोष स्थापना गरी सहयोग अभियानको थालनी गरेका हुन । वडाध्यक्ष ठकुरीले प्राबिधिक शिक्षानै आजको आवश्यक्त भएकाले अक्षय कोष स्थापना गरिदिएको बताए । अन्य बिकसित देशहरुले प्राविधीक शिक्षा बाटनै उन्नती र प्रगतीको पथमा हिड्न सफल भएका बताउदै वडाध्यक्ष ठकुरीले
गरिवी र पछौटेपन हटाउने माध्यम प्राबिधीक शिक्षानै भएको बताए । उनले आफ्नो हरेक जन्मदिनमा १५ हजारका दरले अक्ष्यकोष बृद्धी गर्दै लैजाने समेत बताए । हामीले देखेको समृद्धीको सपना प्राबिधीक शिक्षा बाटनै पुरा हुन्छ ठकुरीले भने“यो महान अभियानमा सहयोग गर्न म अपिल गर्दछु । आफ्नो जन्मदिन वा प्राबिधिक शिक्षा सञ्चलना गर्न आर्थीक सहयोग गर्न चाहाने अन्य जुनसुकै व्यक्ति,संस्थाहरुले यो अक्षय कोषमा सहयोग गर्नु सकिने बताइएको छ ।